Novambra 12, 2010 amin'ny 2:05 aho
Great, Tohizo ny asa tsara!
Novambra 12, 2010 amin'ny 10:04 aho
tsara ny andro
Inona no hafatra:
“Google Sitemaps XML Generator, ny Patch ”
aho : Sitemap Version 3.2.4 ary Transposh Version 0.6.6
Kanjo tsy nisy feo ny pejy dia niteraka tao amin'ny XML.
Novambra 12, 2010 amin'ny 10:33 aho
Ho azo antoka manana ny farany Patch, ohatra:. esory ny & avy teo aloha Patch, Efa nohavaozina ny Changelog, ary ankehitriny ny FAQ amin'ny vaovao io Patch, Raha mbola manana olana aho handefa anareo ny nitampintampina rakitra.
Timo Ligi milaza
Novambra 12, 2010 amin'ny 8:59 am
Rehefa nanao ny asako “Google Sitemaps XML Generator” ary ny dikan-Transposh 0.6.6 ianao dia hahazo ny valin'ny XML Google Sitemap “XML Parsing Hadisoana: tsy misy singa hita, Line Number 1, tsanganana 1:” Na izany aza, rehefa hanala Transposh Bible 0.6.6, Ary Google Sitemaps miasa.
Novambra 12, 2010 amin'ny 11:53 am
An nohavaozina Patch azo jerena ato: http://trac.transposh.org/wiki/PluginSupportMatrix
Novambra 12, 2010 amin'ny 10:24 am
Same olana tahaka ny any aloha dikan hatramin'ny 0.6.3: Taorian'ny fanavaozana hitako “Okt_Oktober_abbreviation” raha tokony ho “OKT” ao amin'ny bilaoginy. Same akory va fohy endriky ny volana, rehefa tsy mitovy anarana alemà avy amin'ny teny anglisy anarana. Izany 0.66 voafafa indray ary ny dikan- 0.61 indray – mety io. Ary proofes plugin manao zavatra tsy mety. Ary tsy te-hampiasa ny plugin fa tsy maintsy miasa miaraka amin'ny tenako nanova PHP… Ary misy fanavaozana ao amin'ny hoavy dia tsy manamboatra azy?
Novambra 12, 2010 amin'ny 10:38 am
Voalohany, azafady mamorona tapakila ao amin'ny Trac (trac.transposh.org)
Faharoa, Masìna ianao, miezaka ny hanome tsipiriany bebe kokoa momba ny rafitra (izay WP ampiasainao, sns)
fahatelo, dia afaka mankarary ny gettext fampidirana, Tokony mety hamaha ny olana tsara kokoa noho ny fanenana ny 0.6.1
Ary tsara vintana…
Novambra 13, 2010 amin'ny 12:04 aho
Nataoko mamorona tapakila…
Novambra 13, 2010 amin'ny 12:37 aho
Haingana sy mahomby fanampiana – Tsy mila manova PHP, ihany hiova safidy iray amin'ny safidy. Great! Ankehitriny dia miasa tanteraka indray! Misaotra anao indrindra!
Novambra 13, 2010 amin'ny 12:26 aho
azo atao ny maharitra Disable e-mail avy amin'ny fandikan-teny Adresses? (na tady sy ny URLs)
Aho hoe ny naorina-in asany, tsy isaky ny fampiasana ny no_translate kilasy.
Novambra 13, 2010 amin'ny 12:55 aho
Raha ny fahafantarako azy, raha kely indrindra URLs (ireo izay voamarika araka ny tokony ho toy ny olona) dia tsy ho nadika, fanamarinana fa ny teny rehetra ao amin'ny andian-teny tsirairay raha mety ho URL na mailaka mety hamorona Mitana ny sasany ambony.
Ivo Minchev milaza
Desambra 17, 2010 amin'ny 8:05 am
Manana olana Backup. I mahazo izao manaraka izao “500 – Mety tsy hamaha ny miaramila 'svc.transposh.org'” rehefa tsindrio ny “Do Backup Ankehitriny” bokotra.
Desambra 17, 2010 amin'ny 11:48 am
Heveriko fa mbola ho olana iray hafa amin'ny cloudflare DNS, I handamina izany amin'ny andro ho avy ny andro.